भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाकाे तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी - Birgunj Sanjalभारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाकाे तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी - Birgunj Sanjalभारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाकाे तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी - Birgunj Sanjal
भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोनाकाे तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी
९ असार २०७८, बुधबार ०८:०९
वीरगन्ज । भारतमा डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्टका कारण कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेल्टा भाइरसको नयाँ म्युटेन्ट खतरनाक भएर निस्कने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
अहिलेसम्म नेपाल, भारत, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगलसहित डेल्टाको नयाँ म्युटेन्ट विश्वका १० देशमा भेटिएको छ । भारतको महाराष्ट्र, केरला र मध्य प्रदेशमा नयाँ भेरियन्टका बिरामी भेटिएकाले सचेत हुन भनिएको छ । भारतमा डेल्टा भेरियन्टकै कारण कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए तेस्रो लहरलाई रोक्न सकिने त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि भारतमा अहिले १८ वर्ष भन्दा माथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने महाअभियान सुरु भएको छ
हरेक हप्ता यसरी रिलिज हुन्थे पोर्न फिल्म, जाँचमा भए कैयौं नयाँ खुलासा
८७ वटा पोर्न भिडियो बनाएर आफ्नो वेबसाइटमा हालेको अभियोगमा अभिनेत्री पक्राउ
जनकपुरमा लालबाबुसँगै इमरानको जलाइयो तस्बिर
३ हजार ४२१ जनामा कोरोना संक्रमण, थप २५ को मृत्यु
जसपा गुमाएको महन्थ समूहले अब के गर्छ ?
भारतमा थप ३९ हजार कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित
के छ जसपा विवादसम्बन्धी १९ पन्ने फैसलामा ? (पूर्णपाठसहित)
राति कति सुत्नुहुन्छ ? डिप्रेसनको सिकार भइएला है
मन्त्रिपरिषद बैठक : यी हुन् पाँच निर्णय